Wilaayada Islaamiga ah ee Gedo oo maanta ka warbixisay waxyaalihii u qabsoomay bishii “Rajab” ee dhamaatay.
Waaliga Wilaayada Islaamiga ah ee Gedo oo maanta shir jaraa’id u qabtay bahda Saxaafadaka ayaa ka warbixiyay waxa ugu muhiimsan howlihii u qabsoomay bishii lasoo dhaafay ee “Rajab” iyo guud ahaan xaalada guud ee ay ku sugantahay Wilaayada Islaamiga ah ee Gedo.
Sh.Bashaar Aadan Xasan Waaliga Wilaayada Islaamiga ah ee Gedo ayaa ugu horeyntii sheegay in bishii Rajab ee dhamaatay ay ku guuleysteen inay dib usoo celiyaan Xoola nool oo lakala dhacay horaantii sagaashameeyadii, arintaas oo dacwadeedu ay socotay in ka badan 3 bilood balse ugu dambayn lagu guuleystay in la xalliyo.
« Mushrikiinta Qabuura caabudka oo Caabdu waaq ka mamnuucay dhagaysiga Siirada Nabi Maxammed Nabadgelyo iyo Naxariis dushiisa ha ahaatee iyo culimada salafka. Dagaalkii galabta lagu qaaday Maleeshiyada Riddada ah oo soo gaba gaboobay iyo Mujaahidiinta oo hore usii durkay. »